Cuntooyinka Cidhib-tirka Maqaayada oo burbursan Qaybta 2 - Cuntooyinka Lugaha
Cunnooyinka Heels Restaurant Resundown Qaybta 2
Cunnooyinka Cidhibtooda 2018 waxaa u hadhay dhawr toddobaad oo kooban! Maaddaama ay taariikhda dhacdada u soo dhowaatay waxaan dooneynay inaan idinla wadaagno macluumaad ku saabsan dhammaan maqaayadaha maxalliga ah oo aad fursad u heli doontaan inaad ka baaraandegtaan Cunnooyinka Ciribta.
Ma jiraan wax loo yaqaan 'Bundt Cakes' oo ah xulashada lama-huraanka ah ee Meals on Heels labadii sano ee la soo dhaafay, waana ku faraxsanahay inay mar labaad u keeni doonaan keega afkooda-cunnada Cunnooyinka Heels! Waxay caan ku yihiin saxeexooda keega bundt kaas oo lagu sameeyay kaamil ah waxyaabo dhab ah, oo cusub. Bundtinis sawirka hoose ka muuqda ayaa horay loogu adeegay Meals on Heels, sanad walbana waxaan la yaabnaa sida dhadhanka iyo macaanku ugu habboonaan karaan hal keeg yar oo cabbirkiisu yar yahay.
Minnesota (iyo Cunnooyinka Cidhibtooda) ee loo jecel yahay, Pizza Lucé, ayaa u adeegi doonta Pizza Lucé, Pizza Lucé, Pizza Lucé, ayaa mar kale sannadkan u adeegi doonta Pizza hal-nooc nooc ah. Mid ka mid ah waxyaabaha ka dhigaya Pizza Lucé mid aad u weyn waa noocyada ay bixiyaan. Ma ogeyd inay haystaan dhimasha-dhamaadka isbuucaan? Sabtida iyo Axadaha laga bilaabo 8-da - 2-da duhurnimo waxaad ka dooran kartaa benedicts, burritos, omelettes, iyo waxyaabo kale oo badan. Pizza Lucé waxay bixisaa suxuun qof kasta oo ka tirsan xafladdaada u dhiman doono si uu isugu dayo. Iyada oo xulashooyinka vegan iyo khudradda, iyo sidoo kale nooc ka mid ah gluten-free ka mid ah menu-yadooda, waxaa jira wax qof walba u baahan! Kani waa sanadkii 7-aad ee Pizza Lucé ay ku taageerto Cuntada on Wheels adoo ugu adeegaya pizza-da la jecelyahay ee Meals on Heels, aad ayaana ugu faraxsanahay inay mar kale nagu soo biirayaan.
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in abaalmarinta The St. Paul Grill ay nagula soo biiri doonto Cuntada Heellada sanadkan! Waxay ku taalaa hudheelka caanka ah ee raaxada leh ee St. Paul Hotel, St. Paul Grill waxay leedahay liis ay ka buuxaan cuntooyinka caadiga ah ee Maraykanka oo ay weheliyaan xulashooyin fara badan oo ah xoqitaanno dhif ah, whiskey iyo cognac. sanado kahor. Sannad kasta waxaan rajeyneynaa abuurista macaan ee ay go'aansan doonaan inay ku siiyaan Cunnada kuwa cidhib-tirka gooya. Ma sugi karno inaan aragno waxa ay ku karbaashi doonaan sanadkan Cunnooyinka Cidhibtooda!
Jikada Fursadaha ayaa ah jiko u heellan uun adeegidda Cunto qaatayaasha Wheels ee aagga Twin Cities. Tan iyo markii la furay sanad ka hor jikada ayaa si is daba joog ah u kortay. Kahor furitaanka Jikada Fursadaha dhammaan 32da barnaamij ee Cunnada Gaarka ah ee shakhsiyaadka ee xaafadda Metro waxay cuntadooda ka heleen dibedda shirkadaha cuntada. Iyada oo loo marayo mashruucan Cuntada Lugaha ayaa awood u leh in ay yareyso kharashyada isla markaana ay siiso caafimaad, ikhtiyaarro menuyo badan oo la beddeli karo. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu quruxda badan ee ku saabsan Jikada Fursadaha oo qayb ka ah Cunnooyinka Cidhib-tirka ayaa ah in ka-qaybgalayaashu ay iskood isugu dayi karaan nafahooda isla cuntada loo bixiyo kuwa qaata Cuntada Gawaarida Markaa inkasta oo aad haysatid kabahaaga ugu quruxda badan, waxaad weli awood u yeelan doontaa inaad gasho kabaha qof kale oo aad u aragto sida cuntada macaan ee Macaamiisha Macaamiilku u helaan!